Amaqiniso angu-10 mayelana namafoni eselula
1) Ukuxhumana kungokwesaba uNkulunkulu: e-Israel ifoni ye-kosher ithola ukuthandwa.
Njengoba wazi, ku-Israyeli ukuthi inani elikhulu kunazo zonke lamaJuda angama-Orthodox ahlala kulo, ngenxa yezizathu ezingokwenkolo baphoqeleka ukuba bashiye eziningi eziphumelele impucuko. Kuze kube maduzane, amakholwa ayephoqeleka ukuba enze ngaphandle kokuxhumana kweselula, kodwa iMIRS yenkampani yeselula yakwa-Israel, kanye nokukhathazeka kwe-Motorola, yabonisa izimangaliso zokuthembeka futhi wakhipha lokho okuthiwa yi-kosher ifoni yomphakathi wamaJuda otholwa, ohlanganisa cishe abantu abayizigidi.
Kuyinto ifoni ekhethekile ngempela. Ayikho idivayisi yokusekela umlayezo wombhalo, ifoni ayiklanyelwe ukuthumela nokwamukela imilayezo ye-SMS, ayikho isithombe nekhamera yevidiyo, akukho uxhumano lwe-intanethi. Ifoni ye-Kosher inomsebenzi wokuxhumana ngezwi, futhi ihlelwe ngendlela yokuthi ayivumeli abasebenzisi ukuthi basebenzise izinsizakalo zokuphola noma izinsizakalo zomsindo.
Cishe, le foni izosetshenziselwa ababhalisile abasha abangaba ngu-300 000. I-MIRK yenkampani isilungele ukunikela ngamanani aphansi amakholi ngaphakathi kwenethiwekhi, futhi izingcingo kwamanye amafoni womqhubi, ngokuphambene, amanani azoba phezulu kakhulu.
Isikhuthazo sokwakha ifoni engavamile, okubonakala sengathi ayinakuthanda abathengi banamuhla, kwakuwumqondo wokuvikela intsha engokwenkolo ezilingo ezingenakwenzeka kuzo zonke izindlela zokuxhumana zanamuhla, njengezingcingo, ithelevishini, amaphephandaba noma i-intanethi.
Umqondo wokwethula ifoni enjalo, evumela ukungaphuli imithetho yezenkolo, wayenesithakazelo kumaSulumane. Kungenzeka ukuthi ngokuhamba kwesikhathi amafoni asebenzayo azovela eRussia, lapho inani lama-diasporas lamaJuda nama-Muslim liphakeme kakhulu.
2) Ingabe kufanele ngithenge amafoni omakhalekhukhwini wokusika?
Isikhathi samaholide asikapheli, abaningi bayahamba phesheya benesifiso sokuphumula futhi bazenzele noma njengesipho ezihlotsheni isikhumbuzo esikhethekile. Muva nje, izakhamuzi ngokuphindaphindiwe ziletha ekhaya hhayi kuphela izindwangu zoboya ezivamile, igolide, ama-trinkets ezinhlanga, kodwa namakholi. Uma uhlela ukuthenga ifoni phesheya, kufanelekile ukwazi ukuthi yikuphi okukumangazayo okukulindele.
IYurophu - hhayi indawo enhle yokuthenga amafoni angabizi kanye nemishini ngokujwayelekile. I-euro iyaqhubeka ikhula, intela ayitholi encane, ngakho-ke amanani amagajethi ahlukene angeke akwazi ukujabulisa. Ngaphezu kwalokho, akunakwenzeka ukuthi uzokwazi ukuthola ifoni nge-layout yaseRussia. Ukuzikhethela akufani nalokho okufuywayo, futhi imodeli yefoni yeselula ehlukile kunzima nakakhulu kunaseRussia.
Amazwe - indawo yokuzalwa yezaphulelo, ukuthengisa nemikhiqizo emisha. Ngempela, izintengo zezimpahla eziningi, ezibhekwa njengeziphakeme kakhulu lapha, zingamangalisa emazweni. Lapha ungakwazi ukuthola kalula noma iyiphi imodeli oyithandayo, noma yikuphi ukucushwa kanye nezinsiza eziyizintandokazi. Uma unesithakazelo ezintweni ezintsha ezingatholakali eRussia okwamanje, khona-ke emazweni ngeke kube nezinkinga ngokuthenga ifoni ekhethekile. I-America - indawo enhle kulabo abafuna ifoni yasekuqaleni nephezulu, i-iPod noma i-laptop.
I-Asia yiyona ndawo ethandwa kakhulu yizivakashi zethu ngokuthenga imishini ehlukahlukene, kufaka phakathi amafoni. Lapha inqwaba yezindawo ezingenamsebenzi, eziheha amanani aphansi, kuyisiko lokuxoxa lapha. Kodwa, uma u-Dubai ungathembela ekuthengeni ifoni ephezulu futhi engabizi, ngokwesibonelo, e-China kunethuba elikhulu lokuthenga i-clone esikhundleni se-original oyifunayo. Yiqiniso, abakhiqizi baseShayina bayakwazi futhi ukukhiqiza amagajethi aphezulu. IJapane ingenye yamazwe abizayo kakhulu ngokuthenga. Lapha ungathola lutho kusuka kuma-rarity models kuya kuma-ultrasonic, kodwa intengo izohambisana. Kodwa-ke, kukhona ithuba lokuthenga ifoni eseyisebenzisile, kodwa ayikho izinga eliphansi kunelo elisha.
Kunoma yikuphi, ukukhethwa kwezwe ngeholide elilindelwe isikhathi eside, kanye nokhetho lokusebenzisa isikhathi sakho nemali, kuhlala kuwe kuphela. Izwe ngalinye emhlabeni lihlinzeka ngemigomo yalo, lapho umuntu ebona khona ukwehluleka, futhi umuntu unesithunzi esiqinile. Kubalulekile kuphela ukugcina izinyathelo zokuqapha nokungazikhetheli ekuthengeni, ngokusekelwe kumanani abo aphansi.
3) Ukunethezeka okungenakufinyeleleka.
Uma ukhumbule umlando wamanethiwekhi ephathekayo, kucacile ukuthi le mpumelelo yentuthuko ayitholakali ngokushesha kubasebenzisi abaningi. Lapho izinkampani zomhlaba zazifuna ukwenza lo mkhankaso omkhulu, kunezibonelo ezibangela ukuzwakalisa kanye nomona, kodwa azifinyeleleki kubantu abaningi.
Isibonelo, i-Goldvish Piece Unique WS1.
Le foni yadalwa futhi ihlala kuze kube namuhla enye yezindleko ezibiza kakhulu emhlabeni. Intengo yocingo ephathekayo ingaba yizigidi ezingu-1 zama-euro, futhi abantu abathathu kuphela emhlabeni bayabanikazi abajabulayo. Ngokolunye ulwazi, bonke laba bantu basuka eRussia.
Intengo ephezulu ingenxa yokubukeka kwefoni, umzimba owenziwe ngegolide eliphuzi, elimhlophe nelomvu lezimoto ezingu-18 futhi lihlanganiswe namadayimane amanzi ahlanzekile.
Okuthandwa kakhulu kumafoni okukhethekile yizibonelo ezahlukene ze-Vertu.
Ngakho, iqoqo le-Vertu Signature Diamond selibe lelinye lamafoni afiseleka kakhulu futhi abizayo kulo mkhiqizo. Le foni yakhululwa ngokukhethekile kwabathengi baseNdiya abahambisa amakhophi angu-200 nje kuphela, intengo yocingo eyodwa yi-$ 350,000. Icala lale foni lenziwe ngegolide futhi lihlotshiswe ngenyoka enamadayimane, ama-rubies nama-emerald. Akungadingeki ukuthi, lokhu kuwuphawu lokuhlakanipha lutholakala kubantu abangamakhulu ambalwa abakhishwa kuwo.
Imodeli ka Vertu yeningi yentando yeningi yi-Vertu Signature Platinum. Le foni yenziwe ngekhwalithi ephakeme yekhwalithi kanye nesikhumba sangempela ngezikhiye zegolide, inemisebenzi edingekayo kuphela, kuhlanganise akukho port ephathekayo noma i-Bluetooth, futhi intengo yalesi model imayelana nama-dollar angu-75,000.
Enye i-brainchild eyaziwa futhi ekhethekile ye-Nokia, njenge-Vertu, iyiselula ye-Mobiado Professional EM. Le modeli yocingo yenziwe ngensimbi eqinile futhi ihlotshiswe nge-rosewood panels enokhuni. Le foni, ngokungafani ne-Vertu efanayo, inemisebenzi ejwayelekile: umdlali we-MP3, ne-Bluetooth, ungafinyelela ku-intanethi. Lesi simodeli singabizwa ngokuthi iningi lentando yeningi futhi engabizi ngalokhu okukhethekile: intengo yayo iqala ngo-$ 2,200,000, futhi abanikazi befoni yalolu hlobo bangabantu abayizinkulungwane eziningana abanenhlanhla emhlabeni jikelele.
4) Gcina ngengqondo!
Njengoba wazi, imakethe yamafoni asetshenziswa eRussia inkulu kakhulu, futhi amamodeli asetshenzisiwe athandwa kakhulu kulabo abangatholakali izinto ezintsha. Kubonakala sengathi akukho lutho olubi ngalokhu: ngemuva kwakho konke, wonke umuntu angazikhethela ifoni, futhi isandla sesibili akusho ukuthi kubi. Kodwa, njengakwamanye amazwe, imakethe yamafoni asetshenzisiwe inezingcingo zayo, okumele wonke umthengi angakwazi ukwazi.
Iningi lazo zonke izingcingo zomakhalekhukhwini zifunwa kubantu abasha abangaphansi kweminyaka engama-22 ubudala nakubantu asebekhulile abanomholo ongaphansi kwesilinganiso. I-brand ethandwa kakhulu phakathi kwamafoni anjalo yi-Nokia, futhi imodeli ethandwa kakhulu yi-Nokia 6230i no-Nokia 3230. Yiwo amafoni alo mkhiqizo okubhekwa njengokugcina futhi okuthembekile ekusetshenzisweni. Izikhalo eziningi nezikhalazo ezihlobene nokuthengwa kwamafoni weselula zivela ku-Siemens, Samsung, Sony-Ericsson ngokuphathelene nokuphazamiseka kwezimo ezihlukahlukene zinkimbinkimbi.
Intengo yefoni esetshenzisiwe ihlale iphansi, futhi ukwehlisa intengo, kubi kakhulu isimo sefoni noma kamuva kukhishwe. Isaphulelo esihle samafoni anjalo isaphulelo se-35%, futhi uma intengo yefoni esetshenzisiwe iphansi kunezingaphezu kwesigamu, kubalulekile ukucabanga ngekhwalithi nokuphila kwesevisi.
Inkinga evame kakhulu ngamafoni wesandla ngecala ibhethri, ehluleka ngokushesha ngisho nangemva kokuvuselelwa isikhathi eside. Ngaphezu kwalokho, ingozi yokuthola ipayipi eyebiwe iphezulu kakhulu, ikakhulu uma ukuthenga kungenziwa esitolo esithile. Ngokweminye imibiko, ama-mobile angu-30% asetshenzisiwe asetshenzisiwe noma alahlekile, ngakho-ke kunengozi enkulu yokuthi umnikazi wangaphambili wefoni uzobonisa futhi imali yakho ngeke ibuyiselwe.
Ukugwema izinkinga ezikhona ezihlobene nokuthengwa kwefoni esetshenzisiwe, kufanele ulandele izinyathelo zokuqapha. Okokuqala, kubalulekile ukuthenga imishini yesandla kuphela ezitolo, hhayi emathempelini emakethe noma kubantu abangabazi. Okwesibili, ifoni kumele ibe nemibhalo, imaphakethe yokuqala kanye nemiyalelo. Okwesithathu, icala lefoni akufanele libe nomonakalo obonakalayo obonakalayo.
Ngaphambi kokuvuma ukuthengwa okunjalo, hlola ifoni, hlola ukuthi yonke imisebenzi yayo isebenza kanjani, qiniseka ukuthi ulondoloza isheke. Uma ifoni ingasetshenziswanga isikhathi eside, kungenzeka ukuthi ingaphansi kwesevisi yewaranti, uma kunjalo, udinga ukucela isigqebhezana esikhethekile.
Kunoma yikuphi, khumbula ukuthi uma uthenga ifoni eseyisebenzise kakade, usengozini yokuthola ihendisethi efihliwe yiziphambeko noma "isikhathi esidlulile" esingakwazi ukuzulazula nganoma yisiphi isikhathi. Kulokhu, umthengi ulahlekelwa njalo.
5) Amafoni kwabesifazane: kanjani ongakhetha?
Ifoni njengesipho somuntu omuhle wesigamu, mhlawumbe inketho ethandwa kakhulu. Lokhu, njengezimonyo, sekuyisikhathi eside sekuyi-fashion factor, imishini yokufashisa, hhayi nje igajethi ewusizo. Ngakho-ke, wonke owesifazane ufisa ukuba nomakhalekhukhwini omuhle futhi othakazelisayo.
Cishe bonke abakhiqizi befoni baveza uchungechunge, okwenzelwe abesifazane ngokuqondile. Ihluke ekuklanyeni okumangalisayo, okulula futhi okulula kakhulu ukuphatha, kodwa bavame ukulandela ngemuva kweminye imikhiqizo emisha ngokwezikhono zobuchwepheshe. Lokhu kungenxa yokuthi abesifazane kubonakala kubaluleke kakhulu kunamakhono okusebenza efonini.
Umholi ongamangalelwa ekukhiqizeni ucingo, yi-Nokia, owadala i-L'Amour line ngqo kwabesifazane. Amakholi alo mkhakha afakwe wonke amadivaysi anamuhla, evumela abanikazi babo ukuba bahambisane nemfashini. Kukhona nesethi ngaphandle kosizo lwamakhi, namakhamera ane-zoom amaningi, ne-MP3 player, ehlangene nokubukeka okungenakuqondakala, ukuqinisekiswa kwesiqinisekiso phakathi kwezilaleli zayo ezihlosiwe.
I-Samsung isilethe emakethe iqoqo lamafoni omama "Le Fleur", okuyizinto ezikhanyayo, ezikhanyayo nezesitayela, ezinikezwa izici zanamuhla - kusukela ekufinyeleleni kwe-Inthanethi, kumdlali we-MP3 namakhamera anamandla.
Ifoni efunwa kakhulu iyi-project ehlanganyelwe ye-Motorola ne-Dolce ne-Gabbana - ifoni ye-RAZR yesigqebhezana segolide se-chic kanye nomdwebo wegama lomuzi odumile.
Uma ukhetha ifoni njengesipho ngowesifazane, qondiswa kuqala ngokuthanda nokuthandayo. Yini ebaluleke kakhulu kuye - ukubukeka noma izingxenye? Yini ayithandayo ngaphezulu - alalele umculo noma uthathe izithombe?
Kubalulekile ukuthi ifoni ikhululekile, ilula futhi ivumelane kalula nasesikhwameni esincane kakhulu. Abesifazane bathanda ukuxoxa nabangani babo, ngakho ibhethri kufanele isebenze isikhathi eside ngangokunokwenzeka enkulumweni yocingo, futhi ifoni ngokwalo inamandla okulanda izingoma ezihlukahlukene nezingoma. Nakani okhiye - owesifazane othanda izipikili ezinde, kuyoba nzima ukusebenzisa ifoni ngezinkinobho ezincane. Qaphela futhi mayelana nekhanda, okufanele lifakwe, linganikeli ekubukeni kwefoni uqobo.
Ukwehluleka okuphela kwalesi sipho: uma uthenge intsha enhle kunazo zonke yenkathi, kunengozi enkulu ukuthi ezinyangeni ezimbalwa enye, iningi lanamuhla futhi elifiselekayo kakhulu lizovela emashalofini. Kodwa, amadoda aphinde asadingeki ahlaziye ubuchopho bawo kulokho okumele anikeze khona.
6) Hlala uxhumane!
Naphezu kokuthi amafoni wesimanje anikezela inani elanele lezindlela ezihlukene zokuhlala othintana nabo, abasebenzisi abaningi basebenzisa kakhulu ukuxhumana nge-intanethi ukuthi abazicabangi ngaphandle kwamakholi wamaminithi, izingcingo ze-SMS, izingcingo ze-ICQ. Kungenxa yokuthi abathandi abanjalo bahlale kuphi noma kuphi, bexhumana nganoma isiphi isikhathi futhi kunezinhlelo ezihlukahlukene zokufaka ICQ efonini yakho ephathekayo.
Futhi ngempela, lolu hlelo luyinto elula kakhulu: imilayezo ifinyelela ngokushesha, ngokushesha kakhulu kunemiyalezo ye-SMS, ngaphandle kohlu lwababhalisile be-ICQ nalabo abhalisiwe encwadini yefoni ngokuvamile ehluke, kepha ngifuna ukuxhumana nabo bonke abantu.
Uhlelo oludumile kunazo zonke luyiklayenti ye-ICQ - Jimm.
Le maklayenti lakhiwe epulatifomu ye-Java futhi ifaneleka kumafoni amaningi, ngoba lezi zinhlelo zivame ukusekelwa. I-Jimm ikuvumela ukuba ulande kuphela lezo zinhlelo ozidingayo, isibonelo, inguqulo yohlelo kunoma yiluphi ulimi oludingayo.
Okokuqala udinga ukuqinisekisa ukuthi ifoni yakho ephathekayo inokufinyelela ku-inthanethi futhi ixhumeke kuyo. Khona-ke uhlelo lulandwa.
Ukuxhuma uhlelo, udinga ukungena inombolo ye-ICQ nephasiwedi kusigaba "se-akhawunti". Izilungiselelo ezizenzakalelayo, kufaka phakathi amaseva nezindawo zokuxhuma, azikhuthazwa ukuba zishintshe, ngoba zinomthwalo wokuxhumana nokusebenza kohlelo.
Khona-ke ungabona imenyu yezilungiselelo, lapho ku-oda elijwayelekile ungakwazi ukulungisa nokushintsha isikhathi, usuku, sebenzisa izithonjana nezindlela ezihlukahlukene zokubonakala, lungisa amakhi "ashisayo" azolawula uhlelo. Ungakwazi futhi ukwenza ngokwezifiso isitayela sokuxwayisa: imiphumela eminingi yemisindo noma ukudlidliza.
Ukuxhumeka kubhekwa ngempumelelo uma, emva kokuchofoza inkinobho "yokuxhuma", ubona oxhumana naye esikrinini. U-intanethi!
I-StICQ enye enye esetshenziswa amakhasimende, kodwa ayithandwa kakhulu. Le maklayenti afanele kuphela kulawo mafoni ephathekayo asekela uhlelo
Symbian OS. Ngokuvamile lolu hlelo lwakhiwe kuma-smartphone, kodwa kulula kakhulu futhi alucacile ukuthi noma ubani angayisebenzisa. Mina namasethingi ahluke kakhulu ku-Jimm, kodwa inqubo yokuxhuma ifana: udinga ukuxhuma ifoni ephathekayo kwi-Inthanethi bese ufaka ukungena ngemvume nephasiwedi.
Kunamanye amakhasimende asebenza kuphela ochungechungeni oluthile lwefoni nama-smartphones, ngakho-ke akuyona ethandwa njengabo ababili. Kunoma yikuphi, uhlelo ngalunye luzokuvumela ukuba ucingo ngamahora angu-24 ngosuku kuzo zonke izindlela.
7) Ukulinganisela kweZero. Yeka ukuthi ungaba kanjani isisulu sabakwa-scammers.
Cishe wonke umsebenzisi wefoni ephathekayo ubhekene nenkinga enjalo: ngeke ube nesikhathi sokufaka imali ku-akhawunti, uzokwenza izingcingo ezimbalwa ngaphakathi kwenethiwekhi, njengoba yonke imali ishona ngokuzumayo futhi ingxoxo no-opharetha ayifaki ukucaca esimweni.
Uma wenqaba kule nkinga, ngaphambi kokwenza isikhalazo ku-opharetha wakho, hlola ukuthi isizathu sokunyamalala kwemali ku-akhawunti akusikho.
Isizathu sezimangalo ezinjalo kungenzeka kube yikho engqondweni yakho engekho. Isibonelo, ikhibhodi evuliwe. Ifoni, elele esikhwameni eduze kwezinye izinto ngekhibhodi evuliwe, ingakwazi "ukubiza" umuntu ngaphandle kolwazi ngezikhathi ezithile, futhi imali ihamba ngendlela engaziwa. Ngakho-ke, hlola izingcingo zakho eziphumayo uma ucabanga ukuthi ibhalansi ayinalutho ngaphandle kwesizathu esicacile.
Isizathu sesibili sokuphanga kwamanga kusetshenziswa izinsiza ezihlukahlukene zeselula. I-simplest yi-sms. Ake sithi uhambisane nomuntu isikhathi eside usebenzisa imiyalezo, futhi ucabanga ukuthi ama-sms angu-10 opharetha akakwazanga ukuhoxisa imali enkulu kuwe. Kodwa kulokho kunama-nuance: ama-SMS - imiyalezo efakwe yiLatini "isisindo" esingaphansi, kunama-sms, ebhalwe ku-Cyrillic, ngokufanele futhi ebiza okungabizi. Ngakho, ngomlayezo owodwa omude ngesiRashiya, opharetha angakwazi ukuhoxisa kalula ku-akhawunti yakho inani elilingana nama-3-sms, ngoba umlayezo uqukethe izinhlamvu eziningi kakhulu.
Okudumile manje ukuncenceza "mahhala", ama-movie, izithombe, izinsizakalo zokuphola ezingasetshenziswa ngefoni ephathekayo, nazo azizona ezishibhile njengoba ucabanga. Uma ungumlingisi wezinsizakalo ezinjalo, kungenzeka ukuthi akekho owebile imali ku-akhawunti yakho. Uvele ukhokhele ithuba lokusebenzisa inceku "yamahhala".
Futhi omunye umthombo wezinkinga ezinjalo ukuxhumana nomakhalekhukhwini uma udakiwe. Ngokuvamile abantu abakwazi ukuzilawula, abakhumbuli ukuthi bangaki, nokuthi kungani bambiza, nokunye okuningi futhi akukho mbuzo wokuqapha isikhathi senkulumo. Kukhona isiphuzu esisodwa kuphela: hlola izingcingo eziphumayo bese ucima ifoni uma ungaqiniseki ukuthi kusasa kuzoba okungenani ipenseli eyodwa ishiye ku-akhawunti.
Kodwa, yebo, kuneziqhumane.
Okokuqala, yimilayezo ye-SMS evela ezinombolweni ezingajwayelekile eziqukethe ulwazi olunqobile isamba esikhulu noma into ebalulekile. Ngokuvamile, ukuze imvume ibe umnikazi ofanele umklomelo, i-SMS eyodwa kuphela edingekayo kuwe, emva kwalokho kungenzeka ukuthi akukho penny esele ebhalansi.
Okwesibili, ithumela imilayezo ngezicelo zosizo ezivela ezinombolo ezingajwayelekile. Ngezinye izikhathi ama-scam "aqagela" futhi asayine ngaphansi komlayezo onjalo negama lomuntu oseduze nawe, cela ukubeka inani elithile kwenye i-akhawunti. Ukuze uqiniseke ukuthi awufuni ukukhohliswa - vele ushayele le nombolo, ku-99% wamacala kuzokhutshazwa, okusho ukuthi awudingi ngempela usizo.
Ngezinye izikhathi izigameko zibonakala zingabasebenzi bezakhiwo zikahulumeni futhi ziqala ukufaka imali ngokukhululekile ngenxa yobugebengu obubekwa icala. Ezimweni ezinjalo, iseluleko sinye: gcina inombolo obizwa kuyo futhi uye emaphoyiseni.
Futhi khumbula: ukugwema ukuba yisiwula, qaphela lapho usebenzisa ifoni ephathekayo!
8) Isevisi emva kokuthengisa: ukuvikela amalungelo akho!
Naphezu kokuthi abathengi abaningi bayazi ukuthi ukukhokhela ukulungisa ifoni engaphansi kwewaranti akudingekile, abasebenzi abasebenzisa izikhungo zesevisi abakhathele ukukhokhisa lokho ababophezelekile ukukwenza mahhala. Ngakho uziphatha kanjani uma uxhumana nesikhungo sezinsizakalo, futhi yikuphi ukuphazamiseka lapho ukubhekana nakho?
Okokuqala, kubalulekile, OKUSEBENZAYO nokuthi KUNGANI. Okusho ukuthi, uma "ugxila", wehlile noma ngandlela-thile wonakalisa ifoni ngokunganakwa kwakho, ukuphazamiseka okunjalo akufakiwe ohlwini lwamawaranti. Kuzodingeka ukhokhele ukulungiswa.
Uma, ngaphandle kwesizathu esicacile, ifoni, engaphansi kwewaranti, ngokungazelelwe yaba yiphutha: ukuyeka ukuvula noma ukuvala, umsindo noma isithombe selahlekile, njll, isikhungo senkonzo kufanele sithathe ifoni futhi siphumelele imbangela yokungasebenzi kahle.
Iseluleko kuphela uma kwenzeka ukuphazamiseka okungazelelwe - ungazami ukuthola isizathu sakho. Icala elivulekile kanye nezigxobo ezigodliwe ziyisiqinisekiso sokuthi uzokhishwa ukulungiswa ngoba ngeke kwenzeke ukufakazela imbangela yokuphazamiseka.
Okwesibili, funda ngokucophelela ulwazi oluchazwe ekhadini lewaranti. Uma i-proprietary, kufanele kube namakheli nemininingwane yokuxhumana yezikhungo zesevisi lapho inkampani owathengayo ifoni isebenza ngayo. Ungasheshi ukushaya ucingo noma ukuya kokuqala. Bheka amawebhusayithi esemthethweni womthengisi noma ukubuyekezwa komkhiqizi mayelana nezikhungo zesevisi futhi, eqondiswa yiwo, khetha okuzoya khona ngenkinga yakho.
Okwesithathu, qaphela ukulondoloza yonke idatha kusuka efonini yakho kwenye imidiya, uma kunokwenzeka, ngoba ngesikhathi sokulungisa yonke idatha ivame ukubhujiswa futhi ayikwazi ukubuyiswa. Susa kanye nezinhlelo ozifakayo ocingweni ngokwakho. Khumbula ukuthi uma ibhethri iphukile, cishe, cishe kuzodingeka uthenge entsha, njengoba iwaranti engavumeleki ukuyenza kubo.
Okwesine, enkonzweni uchaza ngokucacile futhi ngokucacile ukuthi yiyiphi inkinga yenkinga. Phendula imibuzo ngokuyiqiniso futhi unganaki ukucasula. Mhlawumbe abasebenzi bazogcizelela ukuthi ifoni ayilungile ngenxa yokulimala ngokomzimba. Uma kungenjalo, ngokuzithoba, kodwa ngokuqinile uthi akukho ukungenelela, njengoba kwakungekho zizathu ezizwakalayo zokuthi umshini wehle.
Khumbula ukuthi uma ukuphazamiseka kungumphumela womshado wefektri, ungafuna ukushintshanisa ifoni: imali, ifoni entsha yomkhiqizo ofanayo noma enye, inzuzo yayo engadluli owathengiwe.
Ukulungiswa ngaphansi komthetho kufanele kwenziwe ngezinsuku ezingaba ngu-14.
Uma ngabe icala lakho aliqinisekisiwe, futhi ukulungiswa kule nkonzo ethile kuyabiza, ngakho-ke kulokhu kuzoba nengqondo ukukhokha ukulungiswa, kodwa ukuthola insizakalo enezinsizakalo ezingabizi.
Ezimweni lapho amalungelo akho ephulwa khona, uma kunjalo, kufanele uxhumane nensizakalo yokuvikelwa kwabathengi.
9) Amafoni angakaze athandwe.
Izinto ezitholakalayo ezimakethe zamaselula, njengombuso, ziheha ngokushesha futhi zithole umthengi wazo. Kodwa kunamanye amamodeli angahloselwe ukuqashelwa nokuthandwa.
Nansi ukubuka okufushane kwamanye wabo.
I-Nokia N76, ekhishwe ngo-2007 yayiyihluleka kakhulu kwe-Nokia. Isizathu sokuhluleka kwabo phakathi kwabathengi singabizwa ngokuthi yi-plagiarism ecacile: ukuklanywa kwakufana kakhulu ne-Motorola RAZR, futhi ikhwalithi yayinzima kakhulu kunkampani eyazibonakalisa iyimpawu enokwethenjelwa nephezulu kakhulu. Umdwebo ovela kule foni weza ngaphambi nje kwamehlo ethu, izinkampani eziningi zenqabe ukusabalalisa lo modeli ngenxa yezinzuzo eziningi.
Ngenxa yesakhiwo esifanayo, i-Motorola ROKR W5 nayo yahluleka. Kwakufana kakhulu ne-Motorola RAZR futhi kuthengiswa kabi kakhulu. Manje, mayelana nokuguqulwa kwabaphathi benkampani, umhlaba wonke ulindele amanoveli wangempela.
I-LG Jaguar idalwe njengeklasi yezomnotho yocingo lokusetshenziswa okuningi, kodwa ukuklanywa kwayo okubi, okukhumbuza amafoni weselula ngasekupheleni kweminyaka engu-90, akuzange kuthandwe ngisho nokulinganiselwe kakhulu kumali abantu, ngoba akuphelelwa isikhathi.
Omunye ophawulekayo wathengisa abaklami be-Nokia - i-Nokia 8800 i-Sirocco Gold. Abahlaziyi bezimakethe zamaselula bavumile ukuthi lesi simodeli siyinhloko yokusola nokunambitheka okubi. Amatshe enkohliso negolide elikhohlisayo awahambisani namakhasimende - ifoni ayizange iphile ngokulindelekile.
Enye yezithombe ezibuhlungu kakhulu ezikhishwe ngo-2007, singashayela ngokuphepha i-Samsung SGH-P110. Le foni ibonakala ingenangqondo, ifana nesibalo esincane esincane se-Chinese, kunokuba ifoni yesimanje yesimanje, esingekho ithuba lokuvela emakethe yaseRussia nakwezinye izimakethe. Ngisho nezici zezobuchwepheshe zanamuhla azizange zikhokhele umklamo owesabekayo.
Njengoba ungabona, akuyona yonke into entsha esho entsha kakhulu. Ngakho-ke ungasheshi ukufika emgqeni wendabuko eshisayo yenkathi - kungenzeka kube ukwehluleka, futhi wena, njengomnikazi wemodeli engenamsebenzi, udumazekile.
10) Ingabe amafoni aselula ayingozi empilweni yethu?
Kubonakala sengathi lena ingenye yezinkinga ezidume kakhulu, ephethe izingqondo zezigidi zabantu eminyakeni embalwa edlule. Ngamanye amazwe emazweni ahlukene omhlaba uphenyo oluhlukahlukene luyenziwa, ukuzama ukufakazela noma ukuphika ukulimala, okusolakala ukuthi kubangelwa impilo kumafoni weselula namanye amadivayisi angenantambo.
Ososayensi abaphikisanga ukuthi indawo evame eduze nemibhoshongo yeziteshi zamaselula, ukusetshenziswa kwefoni ephathekayo, i-wi-fi kanye namanye amadivaysi ngandlela-thile kuthinta umuntu, okuyisisekelo senkinga kungakanani.
Manje, lapho abaningi bethu sebenzisa amafoni ephathekayo iminyaka engaphezu kwengu-10, ososayensi abathile bahlobanisa izifo zobuchopho ezandisiwe ngaleli qiniso. Ukuhlolwa kwamagundane, okwenziwe eSweden, kwembulani ukuvela kwezicubu zobuchopho kulezo zilwane eziye zavezwa emasimini kagesi amadivayisi eselula.
E-Australia, kwakukhona icala lapho esakhiweni ophahleni lapho umbhoshongo we-opharetha weselula khona, kwakukhona amacala ama-5 amathumba ebuchopho kwabasebenzi kungakapheli inyanga eyodwa.
Izakhamuzi zamadolobha amakhulu azikwazi ukubalekela imisebe eyenziwe yizimbhoshongo eziningi zama-opharetha weselula. Ingabe sidinga ukukhuluma ngokusongela kwezempilo emhlabeni wonke?
Abaningi bathi ucwaningo olwenziwa ososayensi lukhokhwa ngabakhiqizi bamakholi weselula kanye nezinye izinto ezisendlini, noma abayalelwe nguhulumeni futhi abakwazi ukubonwa njengeqiniso.
Kodwa-ke, ososayensi abaningi baseYurophu naseMelika, bebona ukuthi ukwanda komdlavuza, akunakwenzeka ngokunemba ngokufakazela ubuhlobo phakathi kwabo nokusetshenziswa kwamadivayisi angenantambo. Izincwadi zesayensi zishicilela ulwazi lokuthi ithonya lamagagasi kagesi ku-DNA yomuntu alizange liboniswe noma, abukho ubufakazi bokuthi kungenzeka ukuthi "ama-carcinogenicity" alawa maza.
Manje odokotela belulekisa ukuthi bangalondolozi isikhathi eside emzimbeni, bawubheke emgqonyeni wedesksi noma esikhwameni, ungangeni emaphaketheni, ungasebenzisi izindlela ezingenazintambo isikhathi eside ngokulandelana. Ngesikhathi esifanayo, bathi imisebe yamadivayisi eselula ayinaki futhi ayikwazi ukulimaza impilo yabantu.
Omunye angasho ukuthi kwakudingeka sikhethe - kungakhathaliseki ukuthi sisebenzise noma cha izinzuzo zempucuko, kodwa eqinisweni, lokhu kukhetho sekuyisikhathi eside kwenziwa yilowo nalowo kithi.
Ungabeka kanjani ithebula likaKhisimusi?
Indlela yokuhlobisa indlu ngonyaka kaNyoka
Indlela yokuphila kancane emndenini omkhulu
Amafutha abalulekile ekhwalithi
Ingabe indoda ekhishini iyamangala umkakhe?
Ukupheka kwezitsha ezincane zekhalori
Ubuhlobo obuseduze nomyeni wangaphambili ngemuva kwesahlukaniso
Ukuqonda kanjani ukuthi umfana ufuna ukukuanga?
Indlela yokufunda ukuvuka ekuseni kakhulu
Pie nge blueberries kanye peaches ngendlela rustic
Izithelo zePomegranate: izakhiwo eziwusizo
I-Spring igqoka ngo-2008
Imifino efasiteleni, izimfihlo zokuvuna
Indlela yokumboza itafula ngosuku lokuqala lokuzalwa kwengane?
Izakhiwo zokwelashwa nezomlingo we-jade
Izambatho zasekhaya zabesifazane
Iwayini elidumile lasetafuleni elibomvu lase-Italy
Imishado ewusizo kakhulu emshadweni ka-2011
Ungobani, "I-Hot Lioness" noma i- "Blue Stocking"? Ukuhlolwa kwencazelo yocansi